प्रदेश १ कै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्था कोशीको बहिरंग विभाग अनिश्चितकालका लागि बन्द – Khabar PatrikaNp
July 30, 2020 158
विराटनगर : विराटनगरको कोशी अस्पतालमा कार्यरत थप दुईजना स्वास्थ्यकर्मीमा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ । अस्पतालको ओपीडी (बहिरंग) विभागको इन्चार्ज रहेकी नर्सिङ स्टाफ र नाक, कान तथा घाँटी (ईएनटी) रोग विभागमा कार्यरत पारमेडिक्समा बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएको हो ।
उनीहरुको स्वाब परीक्षण कोशी अस्पतालकै प्रयोगशालामा गरिएको थियो । थप दुईजना चिकित्सकलाई कोरोना संक्रमण भएपछि प्रदेश १ कै सबैभन्दा ठूलो सरकारी स्वास्थ्य संस्थाका रुपमा सेवा दिइरहेको कोशीको बहिरंग विभाग अनिश्चितकालका लागि बन्द गरिएको छ ।
अस्पतालका मेडिकल सुपरिटेन्डेन डा. चुमनलाल दासले अर्को सूचना नभएसम्मका लागि ओपीडी सेवा बन्द गरिएको जानकारी दिए । ‘ओपीडी इन्चार्ज र ईएनटीका पारामेडिक्समा कोरोना देखियो,’ उनले भने, ‘त्यही भएर ओपीडी सेवा हाललाई पूर्ण रुपमा बन्द गर्नु पर्ने अवस्था आयो ।’ कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गर्न, सेनिटाइज गर्न र अन्य स्वास्थ्यकर्मीको कोरोना जाँच गर्नलाई सूचना जारी गरेर नै सेवा बन्द गरिएको उनको भनाइ छ ।
अस्पताललाई सुरक्षित बनाउन र अरुमा संक्रमण फैलन नदिन अहिले औषधि छिट्ने काम सुरु गरिएको दासले बताए । सेनीटाइज गरेर ‘डिसइन्फेक्ट’ गरिसकेपछि मात्रै अस्पतालको बन्द गरिएको सेवा सुचारु हुने जानकारी उनले दिए । अस्पतालमा दैनिक एक हजार दुई सय बढी उपचार र स्वास्थ्य परीक्षणका लागि आउने गरेका थिए ।
दासले ओपीडीमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको स्वाब संकलन गर्ने काम पनि भइरहेको जनाए । अस्पतालमा कार्यरत रहेकामा कोरोना पोजिटिभ देखिएपछि धमाधम परीक्षणका लागि स्वाब नमुना संकलन गर्ने काम भइरहेको हो ।
यस अघि अस्पतालमा कार्यरत एक चिकित्सक र एक जना नर्सिङ स्टाफमा कोरोना देखिएको थियो । ती चिकित्सकको कन्ट्रयाक ट्रेसिङ गर्दा ओपीडी इन्चार्ज र पारामेडिक्समा पनि कोरोना देखिएको दासले बताए । हालसम्म अस्पतालमा कार्यरत रहेका चार जना स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित भइसकेका छन् ।
पछिल्लो समय संक्रमित भएका दुई जनाको ट्राभल हिस्ट्री नै नभएको पाइएपछि अस्पतालका सबै स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारीको स्वाब संकलन गरेर परीक्षण गर्ने तयारी भइरहेको जनाइएको छ । अस्पतालका सूचना अधिकारी विष्णुबहादुर बुढाथोकीकाअनुसार अस्पतालमा चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी र कर्मचारी गरेर पाँच सय बढी कार्यरत छन् । शंका लागेका कर्मचारी र स्वास्थ्यकर्मी अहिले क्वारेन्टाइनमा रहेको जानकारी उनले दिए ।
अस्पतालका माइक्रोबायोलोजिष्ट प्रनव यादवले पछिल्लो समय थ्रोट स्वाब परीक्षणका लागि आउनेहरुको संख्या बढेर गएको बताए । अस्पतालमा एक पटकमा ७२ वटा रिपोर्ट दिने क्षमताको पीसीआर मेसिन छ । तर दैनिक चार सय बढी परीक्षणका लागि आउने गरेको जानकारी यादवले दिए । अस्पतालमा विराटनगर महानगरपालिकाब तथा बाहिरबाट संकलन गरेर ल्याइएको नमुनाको परीक्षण हुने र सर्वसाधारण आफै पनि शंका लागेर परीक्षणका लागि आउने गरेको उनको भनाइ छ ।
Prevतरकारी बोकेको कन्टेनर त्रिशूली नदीमा खसेर वेपत्ता भएको छ
Nextएउटा कुर्सीकै लागि पार्टी फुटाउन दिने कुरा हुन्न : वामदेव गौतम
लापरवाही र सरकारले बेवास्ता गर्दा काठमाडौँ उपत्यकामा मात्रै १ सय ३२ जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि
पार्टीको विवादले बैरीहरु धेरै खुशी भए :माधवकुमार नेपाल
मनोकामना माइको दर्शन गर्दै माघ ०८ गते बिहीबारको राशिफल हेर्नुहोस
देखेको १० दिनमा नै पूरा हुन्छन् यस्ता सपनाहरु, हेर्नुहोस् के भन्छ शास्त्रले ….!
फेरी कञ्चनलाई सहयोग लिएर हस्पिटल पुग्दा आमा भयो बिहोस, भेन्टीलेटरमा झनै चिन्ताजनक अवस्था हेर्नुस् (भिडियो सहित )